Eny Ankatso – MyDago.com aime Madagascar
Tonga ity ny volana may fahatelo hanjakazakan’ny mpanonganam-panjakana. Mazava amintsika fa io fanoganam-panjakana nataon’i rajoelina, na mitana ny baiko ny frantsay no nahatonga izao krizy mamono ny Malagasy izao.
Tonga koa ity ny fotoana hijoroan’ny vahoaka. Midangana tsy misy ohatr’izany ny vidim-piainana, miakatra ny saram-pianarana, ny zanaka Malagasy tsy afaka mianatra ara-dalàna intsony. Ny ankizy tsy manana intsony izany hoe ”kit-scolaire” izany intsony, ny eny Ankatso, fitahina ny mpianatra, ampiakarana ny saram-pianarana, tsy voaloha ny tombon’ny vatsim-pianarana isan-karazany. Ny mampianatra dia manana olana lehibe @ karama nefa terena hampianatra mba hisintonana ny olona tsy hidina an-dalambe na hanampy isa eny @ MAGRO. Ny fampananetana poakaty moa dia feno, isaiky ny misy ny fifanarahana dia manainky ny FAT nefa efa heritaona izao tsy misy zavatra tanteraka na iray aza. Ny fanampanatenana anefa milaza hoe atsy ho atsy, afaka andro vitsivtsy, mierina ity ny taona, mitombo ny olana nefa ny teo aloha tsy mbola voavaha.
Handalo “annee blanche” ny mpianatra, ary mbola hampitomboana ihany ireo fampanantenana isan-karazany toy ny hoe hangana cités universitaires sns.. tsy izany anefa ny fangatahina fa ny famoahana ny “calendrier universitaire” milaza mazava ny fidiran’ny mpianatra KA hiarahana @ ireo tompon’andraikitra eny @ Anjerimantolo izany fa tsy UNILATERAL na mandeha ila tahakan’ny fanaon’ny FAT ka ny ministeran’ny fampianarana irery no manapaka.
Ny olan’ny mpianatra moa dia efa tsy noraharahianan’ilay ministra fa hoy izy hoe: “rehefa mila anareo aho dia hitady anareo”.
Marihina fa ny ankamaroan’ny zanaky ny FAT dia tsy mianatra eny Ankatso fa omena bourse makany ivelany daholo. Ka noho izany tsy mampihontsona azy ny olan’ny mpianatra eny Ankatso.
Ankoatry ny fanambaniana ny mpianatra, dia hita koa fa tsy mahavaha olana ny fitondrana FAT fa efa in-8 izao no tapaka ny taom-pianarana ary ny olana ara-karama dia mihamavesatra satria hono”tsy misy ny vola”.
Nefa manambola handehanana any Qatar I rajoelina ary ireo mpanao politika mpitady seza izay tsy nisy voafidim-bahoaka na iray aza, dia mizara vola ao @ CT, CST, Ambohitsorohitra ary indrindra ao @ ireo manamboninahitra mpitarika ny miaramila.
Tsy misy vola hampandehanana ny fampianarana Malagasy. Fa misy vola handehana’ireo mpikambana ao @ FAT any Ivelany na ireo olona marobe niaraka nanao fety t@ fitsingerenantaonan’I andry rajoelina t@ 2009 tao Paris. Ireo vola nanaovana dinika santatra, teny ifampierana, ny conference isan-karazany teny ivato sy ny fihaonana teny Vontovorona, ankoatr’izany dia nilaza I rajoelina fa hanangana kianja sy hopitaly manaram-penitra ao koa ny fanamboarana ireo toerana fanaovana fety na fihetsiketsehana toa an’Antsonjombe sy ny fanafarana mpanakanto vahiny.. noho izany dia MISY IZANY NY VOLA. Fa tsy misy ny omena ny Mpianatra Malagasy.
NY ZON’NY FAMPIANARANA TSY MAINTSY AROVANA @ FOMBA REHETRA
Auteur LazalazaoPublié le 3 mai 2011 Catégories Malagasy, Politique
7 pensées sur “Eny Ankatso”
3 mai 2011 à 9 h 48 min
Miala tsiny, fa matoa tsy misy mihetsika, dia mbola mandeha tsara sy lavorary ny fiainan’ny vahoaka malagasy !!!!
Inona tsara moa ity zon’ny fampianarana ity ?
Zon’ny mpianatra, zon’ny mpiasam-panjakàna, zon’ny mpitsara, zon’ny mpitsabo, ets….
Samy be taraina daholo, fa IZA NO TENA MBA MIARO NY ZON’NY VAHOAKA MALAGASY ?????
Mbola misy dikany ve izany vaombolana atao hoe ZO izany, amin’izao fotoana izao ??????
Qui ignore son passé, est condamné à le revivre !!!
Misy zavatra telo no misongadina: 1) Ny Malagasy hatreto aloha dia samy mijery ny(ambany)fotrany ka ireo hetsika etsy sy ero toy ny mpamily fiara be t@ 28 avril na ireto hetsiky ny mpianatra eny Ankatso, na ny hetsiky ny SMM na ny mpivarotra sns… dia ao anaty ny faritra misy azy ireryihany (secteur), izany hoe hetsika Corporatiste fotsiny 2)Ireny olona ireny anefa dia saiky tsy voatery avy ao @ « ankolafy telo misokatra » ka na corporatiste aza izy ireny rehfamiaraka hatao ilay izy dia « ho lany pile »@ io ny FAT,hoy R Constant izay. 3) Ny Malgasy mahita ny fampihorohoroana sy ny hamafin’ny fiainana dia tsy mihetsika fa aleo maty rahampitso (dia mitsipozipozy anio) toy izay maty androany.
Izany hoe raha mbola misy hirika tsy hanaovana sakoro ny gasy dia tsy miditra, tsy ohatry ny tany Egypta sy Tonizia. Ny « zo » no karazana antony (pretexte na motivation) hihetsehan’ny olona. marina fa teny efa nilaozan’ny toetr’andro izany nefa io indrindra no mety hampipoaka ny sarom-bilany. Tadidio fa manakaiky ny 13 mai…
KILALAO dit :
3 mai 2011 à 19 h 17 min
Marina mitsy ny volazanao ry LAZALAZAO ny gasy dia hendry tsy tia an’zany gidra2 zany nefa kosa raha izao fona no hiainana tsy maintsy hipoka ny sarombilany , ary tsy hoela ntsony raha ny fahitako azy, efa hita mazava be zao ny zavatra ataon’ny rajoelina isany mpandaiga velona mievitra ny vahoaka malagasy dômélina!tsy ho ela ntsony io dé hisy zavatra iseo eto @tsika
Azonao ny tiako ho lazaina ry LAZALAZAO, fa misy ahitsiko kely !!!
Zo izany no ataon’ny frantsay hoe DROITS FONDAMENTAUX, anisan’ny sarobidy indrindra amin’ny fiainana andavan’andro !!
Voahitsakitsaka loatra ny zon’ny vahoaka, any ka tsy fantany intsony ny dikan’izany !
Moa tsy toy ireny olona voatery manao asa terivozona ireny ! Voavely amin’ny karavasy isan’andro, ka na ompa faran’izay tsy azo leferina aza, tsy maha taitra intsony !
Tsy mitondra na ho aiza na ho aiza ny lutte corporatiste. Fitiavan-tena sisa no betsaka sy manjàka, ary izay hiainan’ny malagasy amin’izao fotoana izao, ary ao anatin’izany koa ny 3e point-nao !
Mba tongava saina rankizy a! Fa angaha ianareo tsy olona manampahaizana no dia manaiky rebireben’ireo FAT ireo? ny zanany mianatra tsara any ampita noho ny volanareo, izy migalabona tsra, noho ny volanareo, tsy hiala eo mandrakizay izy akory ary tsy misy dikany aminy izay fampianarana ambony izany rehefa tsy mampiditra vola any am-paosiny e! mieritrereta, tsy maintsy mihetsika, ary tsy miandry n’izan’iza, tsy maintsy miady, aok’izay, ampy izay, tongava saina, fa manabe takolaka an’ireo FATn’alika ireo fotsiny.Ndao, ndao, vonjeo ny firenenao fa ho voavonjy ao anatin’izay koa ianao.
4 mai 2011 à 17 h 04 min
Zon’ny fampianarana, tsy ambony noho ny « zon’ny CAPSAT » !!
Firy millions indray no lany tamin’ireto 4×4 jaojaopila sy fitaovana samihafa ???
Sa……tsy volam-panjakàna no nividianan’azireo ?? Raha tsy volam-panjakàna, dia vola avy aiza indray ?????
Tambaza fa rany izay mafy mihitys nymiaramla tsy hihetsika. Ny vola handoavana azy dia fantatra fa ny karaman-Jodasy sy ny halatra bois de rose ary ny volam-panjakana. Betsaka ireo raha omena an’ireo olom-botsy fa vitsy hoan’ny Malagasy 20 tapitr’isa.
Ny kianiko eto dia ny Malgasy dia mirona tafahoatra any @ tombotso manokana ka ilay fitiavan-tanindrazana sy foto-kevitra dia any ambany, ilay efa fantatrareo…. Nefa, ao @ izao fitavozavozan’ny vahoaka izao mihitsy no mitsy voadona mafy sy tena hana-poaka ny sarom-bilany ka noho izany dia raha vao mandeha ny feo alohan’ny 13 mai dia aoka isika hiara hirona daholo daholo ka manao izay farany tratrany ny tsirairay etsy an-daniny ary miara miaraka daholo rehefa tonga ilay sioka tokana etsy ankilany. Averiko ihany fa alohan’ny 13 mai …. Tsy faran’ny tolona anefa izany fa rehefa lany tamingana ny foza fa mijanona ny tolona.
Précédent Article précédent : A qui profitent les lobbyings de Rajoelina ?
Suivant Article suivant : La VOIE de la Raison sincère, nécessaire, utile, pour défendre l’intérêt supérieur de la Nation Malagasy